WICShopper waxay bixisaa qalab kuu fududeynaya WIC inaad isticmaasho. Dhammaan wakaaladaha lama taageerayo oo waxay leeyihiin awood isku mid ah sidaa darteed hubi inaad akhriso sharaxaadda dukaanka app!
FADLAN! Akhri sharaxaadda dukaanka barnaamijka si aad u hubiso in hay'addaadu taageerto kahor rakibidda barnaamijka! Haddii kale, waxaad noo soo diri kartaa emayl ahaan WICShopper@jpma.com si aad u ogaato haddii iyo marka hay'addaada la taageerayo.
WICShopper wuxuu taageeraa barnaamijyada WIC gobolada soo socda: Massachusetts, Florida, Iowa, Kentucky, W. Virginia, Texas, New Mexico, iyo Wyoming
Isdiiwaangali adigoo adeegsanaya lambarka 16 lambar ee ku yaal wejiga hore ee kaarkaaga WIC EBT. Diiwaangelintu suurtagal maaha TX, NM, WY ama OH.
Markaad ku qorto kaarkaaga, adiga hadda Faa'iidooyinka ayaa si otomaatig ah ugu soo dejisan doona barnaamijka. Waan ka xumahay TX, WY iyo NM, tan wali suurtagal kama ahan goboladaada!
Ma aragtid hay'addaada oo liis garaysan? Noo soo sheeg arrintaas.